लागुऔषधसहित नागढुंगाबाट एक जना पक्राउ – Hotpati Media
१५ बैशाख २०७६, आईतवार १२:२७ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
काठमाडौं । महानगरी प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले लागुऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरी प्रहरी प्रभाग नागढुंगाका प्रहरी प्रमुख ज्ञानवहादुर खड्काको नेतृत्वको टोलीले चन्द्रागिरी न.पा वडा नं. २ नागढुंगा स्थित बुटवलबाट काठमाण्डौँतर्फ आउँदै गरेको लु १ ख ८७६६ नम्बरको को यात्रु बाहक बस चेक जाँचको क्रममा लागुऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
महानगरी प्रहरी बृत्त थानकोटका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाका अनुसार जिल्ला कास्की पोखरा लेखनाथ उपमहानगर पालिका वडा नं. ९ नयाँबजार घर हुुने १९ वर्षीय सफल गुरुङ्गलाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरिएको बताए ।
गुरुङ्गको साथबाट डाईजेपाम २० एम्पल, फेनारगन २० एम्पल र नुफिन २० एम्पल फेला परेको बृत्त प्रमुख थापाले बताए । उनलाई नियन्त्रमा दिई थप अनुसन्धान पश्चात लागुऔषध ऐन अन्र्तगत मुद्धा चलाइएको थानकोट प्रहरीले जनाएको छ ।